ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ 40. လမ်း ၊ 12.5'x40'၊Hall၊RCခင်း၊ရေ၊မီး၊ မြေညီ+ထပ်ခိုးပြည့် -4သိန်းငှားရန်ရှိပါသည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19780878 အတွက် ဗမာသဈစာကုမပွဏီ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ 40. လမ်း ၊ 12.5'x50'၊Hall၊ပြင်ဆင်ပြီး၊ရေ၊မီး၊ မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ -5သိန်း ငှားရန်ရှိပါသည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19768115 အတွက် ဗမာသဈစာကုမပွဏီ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ 35လမ်း ၊ 50'x50'၊MB-2၊BR-2၊ပါကေး၊A/C၊ 6သိန်း ငှားရန်ရှိပါသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19762515 အတွက် ဗမာသဈစာကုမပွဏီ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🏡 ဗဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းတွင်တိုက်ခန်းငှား မည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19759195 အတွက် ငွေအိမ်စံ အိမ်၊ခြံ၊မြေ အကျိုးဆောင် (Ngwe Aein San Real Estate) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျောက်တံတားမြို့နယ် လမ်း ၄၀ တိုက်ခန်းအငှားပါ
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19756879 အတွက် ဖြိုးသစ္စာ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊39လမ်းတွင်ရှိပါသည် ။ 12.5'x50'၊ BR-1၊ ပါကေးခင်း၊ပြင်ဆင်ပြီး၊ 3လွှာ 3သိန်း ငှားရန်ရှိပါသည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19751607 အတွက် ဗမာသဈစာကုမပွဏီ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09788855333, 09785555699, 09788855333, 09266677877, 09421045692, 09420074367,
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ဗန္ဓုလမ်းမ ၊ 30'x50'၊BR-2၊လျှာထိုးခင်း၊ရေ၊မီး၊A/C၊ 7.5သိန်း ငှားရန်ရှိပါသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19749379 အတွက် ဗမာသဈစာကုမပွဏီ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊36လမ်း ၊ 20'x50'၊BR-2၊ကိုရီးယားပါကေး၊ရေ၊မီး၊ A/C၊ ပြင်ဆင်ပြီး၊ 4.3သိန်း ငှားရန်ရှိပါသည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19749287 အတွက် ဗမာသဈစာကုမပွဏီ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19742178 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊40လမ်း 12.5'x50'၊Hall၊ကြွေပြာခင်း၊ပြင်ဆင်ပြီး၊ ရေချိုးခန်း/အိမ်သာ -2စံုပါ။ 6သိန်း ငှားရန်ရှိပါသည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19738746 အတွက် ဗမာသဈစာကုမပွဏီ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်